Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Muqtaar Robow la soo daynayo. – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa u ballanqaaday Waxgaradka degaanada maamulka Koonfur Galbeed in sidda ugu dhaqsiyaha badan loo sii deyn doono wadaadka lagu magacaabo Mukhtaar Roobow.
Gudoomiye Mursal oo kulamo kala duwan la qaatay waxgaradka iyo bulshada rayidka deegaanada maamulak koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inuu dadaal badan ku bixinayo inuu xoriyaddiisa heli doono Mukhtaar Roobow Cali Abuu mansuur.
Waxaa uu sheegay in Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu dadaal badan ku bixin doono soo deynta Mukhtaar Roobow
Mukhtaar Roobow Cali Abuu mansuur oo horay u ahaa ku xigeenka hogaamiyaha AL-shabaab ayaa hada ku xiran Magaalada Muqdisho, waxaana soo xiray dowladda Soomaaliya ka dib markii uu magaalada Baydhabo ka bilaabay Olole ku aadan Musharaxnimadiisa xilka Madaxtinimada Koonfur Galbeed dabayaaqadii sanadkii hore.
xarigiis waxaa ka dhashay Banaanbaxyo ay dad ku dhinten oo ka dhacay Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya,madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Masuuliyiin kale ayaana ku howlan sidii wadaadkaas uu dib markale xoriyadiisa ugu heli lahaa.
Howlgal ganacsato lagu xiray oo ka dhacay magaalada Jowhar. →